War Saxaafadeed: Gardarada Qaawan ee Maamulka Gobollada Waqooyi
Jaaliyadda Dhulbahante ee W/Ameerika
Dhulka Forum | Dec 11, 2002
Annaga oo ah Jaaliyadda Dhulbahante ee ku nool waqooyiga Ameerika waxaannu u soo gudbinaynaa dhamaan Bulshada caalamka ee jecel nabadda, baaq ka tarjumaya dareenka bulsha weynta iyo waxgaradka dhulbahante meel kasta oo ay joogaan.
1. Waxaa magaalada Lascanood taariikhdu markay ahayd (12/7/2002) sagaalkii subaxnimmo weerar qaawan ku soo qaaday maleeshiyo hubaysan oo uu hogaaminayo Dagaal Ooge “Riyaalle”. Weerarkaas oo uu kala kulmay jab iyo halaag isla markaana geystay qasaare ballaadhan oo naf iyo maalba leh.
· Hadaba haddii aannu nahay bulshaweynta iyo waxgaradka dhulbahante u gudbinaynaa caalamka in wixii meeshaa ka dhacay ay mas’uuliyadiisa leeyihiin maleeshiyada uu hormuudka ka yahay maamulaha gobolka Waqooyi Galbeed. Waxaannu Caalamka iyo bulshaweynta Soomaaliyeed ee nabadda jecel waxaannu ogeysiinaynaa in Maamulkaasi uu meel kaga dhacay xaquuqda banii’aadamiga, kaas oo ku soo duulay dhul iyo dad uu aannu wax shaqo ah ku lahayn isla markaana geystay falal xunxun oo xasuuq iyo dil, boob iyo dhacba leh. Waxaannu dhamaan ka codsanaynaa in bulsha weynta caalamku kala xisaabtanto wixii halkaa ka dhacay Dagaal oogaha Goballada Waqooyi iyo maamulkiisa, kuna dhaleeceeyaan gardarada qaawan ee loola badheedhay degaankaa iyo dadweynahaa Soomaaliyeed.
· Waxaannu dhamaantayo hanbalyo iyo bogaadin u soo jeedinaynaa ‘naftii hurayaashii’ u huray naftooda iyo maalkooda difaaca iyo nabadgelyada degaankooda, kuwaas oo difaacay dalkooda, magacooda iyo sharaftoodaba. Waxaannu ilaahay uga baryaynaa in uu jannadii ka waraabiyo intii naftooda ku weydey ehelkoodiina samir iyo iimaan ka siiyo. Waxaannu annaga oo ku hadlayna magaca deegaanka Sool, Sanaag & Hawd ugu baaqaynaa bulshada caalamka in aannu habeen iyo maalin diyaar u nahay in aannu ka qayb qaadanno difaaca iyo taageerada ummadda Puntland, gaar ahaanna ta dhulbahante “hiil iyo hooba”.
MADAXWEYNE KU XIGEENKA PUNTLAND OO SHIR JARAA’ID KU QABTAY ELDORET Dec 9
Madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Puntland mudane Maxamed Cabdi Xaashi oo.. GUJI 8/12
Dagaal aad u kulul ayaa ka dhacay magaalada laascaanood.. GUJI 8/12
warsaxaafadeed ururkaasi soo gaarsiiyey SomaliTalk ayuu Guji..7/12
· Waxaannu caalamka u gudbinaynaa in “midnimmada umadda soomaaliyeed ay tahay Muqadis” isla markaana aannu diyaar u nahay in aannu u dhimanno ilaa qofka ugu danbeeya. Waxaannu u sheegaynaa caalamka iyo dadka nabadda jecel in “Riyaalle” uu jebiyey xeerkii nabadda ee u dhaxeeyay beelaha deriska ah ee “Isaaq & Daarood” isaga oo xadgudub ku sameeyey xeerkii nabadda si uu cimri dherer ugu helo maamulkiisa. Waxaannu ugu baaqaynaa dhamaan beelaha deriska ahi in ay iska ilaaliyaan dhagarta iyo denbiga ay maleegayaan dagaal Oogayaasha Gobollada Waqooyi, waxaannu ka codsanynaa beelahaasi in ay ka feejignaadaan wax allaale iyo wixii wax u dhimaya nabadooda iyo deris wanaagooda.
2. Waxaannu dhammaan beesha dhulbahante u gudbinaynaa oo u soo jeedinaynaa in ay ilaaliyaan isla markaana qaataan masuuliyadda difaaca iyo nabadgelyada ummadooda iyaga oo isku duuban isla markaanna dhowraya sharciga iyo maamulka u degsan geyigooda Puntland.
· Waxaannu Bulsha weynta deegaanka dhulbahante u soo gudbinaynaa in ay maxkamad soo taageen ‘dhuuni qaatayaashii’ masuulka ka ahaa u sahlidda in “Riyaalle” ku soo qaado weerar deegaankooda. Waxaannu ka codsanaynaa in si dhaqso ah sharciga loola tiigsado dhammaan dadkii wax geeystay mashaqadaas ee u dhashay deegaankaas.
· Waxaannu ka codsanaynaa in maamulka Puntland ee aannu qaybta ka nahay uu hanto kuna laba laxaadsado sugitaanka xuduudaha, maamulka iyo nabadgelyada gobolladaas iyagoo kaashanaya dhammaan shacabka iyo bulshada deegaanka.
· Waxaannu u gudbinaynaa uguna digaynaa beelaha “Waqooyi galbeed” in ay ka digtoonaadaan gardarrada iyo weererka is miidaamiska ah ee beryahan danbe uu maamulkoodu kula kacayo deegaannadda ay deriska yihiin, kaas oo keeni kara burbur iyo colaad dabadheeraata oo hor leh oo dhexmarta qabaa’ilka deriska ah.
La xiriiri: dhulka_forum@yahoo.com
Afeef: Aragtida qoraalkan waxaa leh ayna gaar u tahay qorayaasha ku saxiixan, kan atarjumi maayo aragtida SomaliTalk